लालपुर्जा खोज्दा राजधानी ‘उपहार’:: Naya Nepal
दाङ : भालुवाङ क्षेत्रमा बस्ती बसेको चार दशक भयो। यहाँका १ हजार ५ सय परिवारकोआफू बसेको घर र जमिनको लालपुर्जा पाउने चाहना अझै पूरा भएको छैन। तर, भालुवाङलाई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएपछि स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ।
राजनीतिक रूपमा गुमनामजस्तै रहेको भालुवाङलाई राजधानी प्रस्ताव गरिएपछि चर्चामा आएको छ। यो विषय भालुबाङ क्षेत्रलाई भने ‘सरप्राइज’ नै बनेको छ। यो क्षेत्रमा राजधानी व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती र जटिलता देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। सबैको केन्द्रमा पर्ने स्थान भएकाले उपयुक्त रहेको उनको भनाइछ। आवश्यक पूर्वाधार र क्षेत्र निर्माणमा पूर्ण रूपमा गाउँपालिका लाग्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने बताए। भालुवाङ क्षेत्रले तीन जिल्लालाई छोए पनि अन्ततः प्रदेश ५ को राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र केन्द्रित हुने देखिन्छ। राप्ती गाउँपालिकाको प्रमुख बजार भालुवाङ नै हो।
प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव शुक्रबारै प्रदेशसभामा पेस गरियो। यसलाई दाङका बासिन्दाले स्वागत गर्दे प्रदेश सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन।
गाडी चलेपछि बसेको बस्ती चुरे पहाडको फेद र राप्ती नदी किनारमा पर्ने भालुवाङ अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको क्षेत्र हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने भालुवाङ पूर्वी दाङको अहिलेको मुख्य बजार हो। प्यूठान हुँदै रोल्पा जाने राजमार्ग यहींबाट छुट्टिन्छ। प्यूठान र रोल्पा जाने नाकासमेत बनेको छ, भालुवाङ क्षेत्र।
भालुवाङको खास बजार पहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा पूर्वतर्फ थियो। रोल्पा, प्यूठानका बासिन्दा त्यहीँ किनमेल गर्न आउँथे। तर, जब पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यो बजारभन्दा पश्चिमबाट बन्यो तब राजमार्गलाई छोएको ठाउँमा नयाँ बजार बस्यो। नयाँ बजारलाई पुल्चोक नामकरण गरियो।
चल्तीको बजार सुक्दै गयो र पुल्चोकमा सहरीकरण बढ्दो क्रममा छ। अर्बौंका पूर्वाधार बनेका छन्। तर, भालुवाङ बजार वनको स्वामित्वमा छ। यो वनको क्षेत्र हो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग खुलेपछि गाडीको चहलपहल सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय वन फँडानी गरी त्यहाँ घर बनाएर बस्न थाले। भालुवाङको पुल्चोक क्षेत्रका अधिकांश घर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनेका छन्। तर, त्यहाँको जग्गाको लालपुर्जा बजारमा बस्ने कसैसँग छैन। भालुवाङ बजारको जग्गालाई सरकारले स्वामित्व नदिए पनि उनीहरूसँग नगर विकासले दिएको एउटा रसिदका आधारमा बिजुली, खानेपानी र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए। उनका अनुसार ३१ बिघाभन्दा धेरै जग्गामा फैलिएको भालुवाङ बजारमा १हजार ५ सयभन्दा बढी घरहरू बनेका छन्।
चुनावी नारा थियो राजधानी
दाङमा निर्वाचनमा जाने सबै राजनीतिक दलको चुनावी नारा नै राजधानी थियो। यही नारा अघि सारेका शंकर पोखरेलले दाङबाटै चुनाव जिते। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री भएका छन्। उनी दाङवासी नै हुन्। दाङबाटै चुनाव जितेर कृष्णबहादुर महरा सभामुखसम्म बने। तर, प्रदेश राजधानी दाङमा ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरूप्रति दाङवासीले असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए। विभिन्न तरिकाले दबाबसमेत सिर्जना गर्दै आएका थिए।
कोरोनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. आचार्यले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मन्त्रीनिवास पुल्चोकलगायत सरकारी निकायले सुरक्षाका महत्वपूर्ण विधिहरू अपनाउन नसकेकाले कर्मचारीहरू संक्रमणको मारमा पर्ने क्रम वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले सरकारका सबै कार्यालय र निकायमा दिनमा एक पटक अनिवार्य रूपमा ‘डिस्इन्फेक्टेन्ट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता अाैल्याए ।
यसैगरी, डा. आचार्यका अनुसार सरकारका सम्पूर्ण निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, चालक, सुरक्षागार्ड, खाना भकाउने भान्छेलाई अनिवार्य रूपमा पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालय र क्वार्टरभित्रका बाथरुम, फोनसेट, रिमोट कन्ट्रोल, प्लास्टिकका भाडाहरू, तरकारी बोक्ने झोलाहरू, पानी खाने सिसाका गिलासहरू, सरकारी एम्बुलेन्स, गाडीहरू तथा सरकारी भवनहरूमा ०.५ प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड र ७० प्रतिशत इथानोलले प्रत्येक दिन पूर्ण रूपमा सफा गर्नुपर्ने सुझाव डा. आचार्यको छ ।
‘सरकारी कार्यालयलाई यसरी पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न नसकेर लापरवाही र हेलचेक््रयाइँ गर्दै जाने हो भने अबको डेढ महिनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिने निश्चित छ,’ डा. आचार्यले राजधानीसँग भने ।
चिकित्सकले सकभर भौतिक दुरी कम गरे संक्रमणबाट टाढा रहन सकिने बताएका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले उच्च पदस्थहरूले पनि संक्रमणबाट टाढा रहन भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सरकारी उच्च पदस्थहरूले भर्चुअल माध्यमद्वारा नै कार्यक्रम तथा बैठक राख्ने र अबका दिनमा भेटघाटलाई बन्द गर्नुपर्ने आवश्कता आंैल्याए । कोरोनाबाट बच्न मास्कको नियमित प्रयोग र आत्मानुशासन नै महत्वपूर्ण कुरा भएको डा. पुनले बताए ।